YouTube Original ga-n'efu n'efu niile | Gam akporosis
YouTube Original ga-abụ n'efu maka ndị ọrụ niile
YouTube Original bụ ikpo okwu ebe webusaiti a maara nke ọma na-ebugo ọdịnaya nke ya, dika usoro. Ọ bụ ezie na nzaghachi nke ndị na-azụ ahịa abụbeghị ihe kachasị mma, nke na-amanye ha ime mgbanwe na ikpo okwu a. A na-atụ anya na rue Septemba, ọ ga-enwere onwe ya ịnweta ọdịnaya ndị a, nke rue ugbu a akwụ ụgwọ. Mgbanwe dị mkpa na akụkụ weebụ na nke a.
Yabụ ị ga-enwe ike ịnweta YouTube Original n'efu, ọ bụ ezie na a ga-ọkwa ọkwa dị ugbu a. Otu ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ si achọ ịkwalite ikpo okwu a, nke na-enwebeghị ike ịchọta ọnọdụ ya n'ahịa n'ime ọnwa ndị a kemgbe ewepụtara ya.
Mkpebi a anaghị emetụta ọdịnaya niile. Dị ka ha na-ekwu site na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya, usoro ọhụrụ ndị a, ihe nkiri na ihe nkiri YouTube Original malitere mgbe September 24, 2019, nwere ike ịnweta n'efu, na mgbasa ozi. Ọ bụ ezie na ndị otu dị elu ga-ejide ụfọdụ uru.
Ebe ọ bụ na ndị nwere a adịchaghị na akaụntụ ga nwee ike ozugbo nweta ihe ọ bụla merenụ ka ewepụtara gị n'usoro. Ọ bụ ezie na ndị na-eji akaụntụ efu aga-echere obere oge iji hụ ya. Ọ bụ otu n'ime ndị oké iche na nke a.
Ya mere na-achọ inyekwu ndị ọrụ ohere na YouTube Original, ma na-enweghị ndị ọrụ nwere akaụntụ ịkwụ ụgwọ na-efunahụ uru ha. Ma ọ bụghị ya, ọ dịghị onye ga-achọ ịnweta akaụntụ ịkwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu a. Ọ bụ ụzọ ịkpọte mmasị n'ebe ọ dị,
Ajụjụ bụ ma ọ ga-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ gaghị arụ ọrụ. Ihe di n’ime ya bu nke ebiputara na YouTube ha anaghị enwe nnukwu ewu ewu, n'agbanyeghị ọtụtụ mgbalị nke ụlọ ọrụ na nke a. Ya mere, anyị ga-ahụ ihe na-eme ha, ọ bụrụ na ha jikwaa aha ha chọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị n’echiche a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » YouTube Original ga-abụ n'efu maka ndị ọrụ niile
OPPO ẹkedori ya n'okpuru-igwefoto ekwentị ekwentị na 2020